अब अकम्युनिष्ट !
(धेरै अघि कमरेड प्रदीप नेपालले संस्मरण लेख्न सुझाव दिनुभएको थियो । पछि पनि धेरैले त्यही सुझाव दोहो¥याउनुभयो । लोकप्रिय भारतीय नेपाली कवि मनप्रसाद सुब्बाले पनि केही महिना अघि त्यसै भन्नुभयो । त्यसको कुनै औचित्य र मूल्य छैन भन्ने लाग्थ्यो । तर सहारा अनाथ आश्रमको नाममा भाइरल बनाइएको र बेलबारीमा तरङ्ग ल्याएको विषयमा स्पष्टीकरणसमेत हुने गरेर मेरो विश्वास र ज्ञानको आधारमा लेखेको छु, यो लेख ।)
निकै दिन अघिको कुरा । लोहोन्द्रा खोलामा कसैको मलामी गएको थिएँ । एक जना मित्रले नजिक आएर नमस्ते गर्दै भन्नुभयो, ‘होइन, लालभित्तीमा हाम्रा दुई जना निर्वाचित माननीय हुनुहुन्थ्यो । एक जनाले त झुण्डिएर आत्महत्या गर्नुभयो । तपाईं पनि त्यसै गर्नुहुन्छ कि ?’ यस्तो अप्रत्याशित प्रश्नले अलमलमा परेँ । एकछिन त के भन्नु के भन्नु भन्ने भयो । उनले मनका साँचा कुरा नै बोले भन्ने लाग्यो । गम्भीर भएँ । रिसाइनँ, चित्त पनि दुखेन । तर मुखमा जवाफ आइहाल्यो, ‘ए हजुर, म त अर्कै धातुले बनेको मानिस पो हुँ । त्यसो त कसरी गर्न सक्छु र ? बेलामा सङ्केत मात्र पाएको भए उहाँलाई पनि बचाउने थिएँ । सिङ्गो नेपाली समाजको बद्नाम हुन सक्ने दुर्घटना हो यो । बेलामा अलिकति सङ्केत मात्र पाएको भए यस्तो दुर्घटना अवश्य पनि हुन दिने थिइनँ !’
राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्णबहादुर धिमाल अति असहाय, अभावग्रस्त र रोगग्रस्त अवस्थामा हुनुभएको थाहा पाएँ । भेटें । केही मित्रहरूलाई जानकारी गराएँ । छिटै आवश्यक सहयोग जु¥यो । आपूmसमेत भएर अस्पताल लगियो । खास जटिलता नभएकाले छिटै ठीक पनि हुनुभयो । उहाँको नियमित रेखदेख र सहयोगका लागि नातेदार कविन्द्र धिमालसँग अनुरोध गरेँ । हर्निया (होला) को एउटा सामान्य अपरेशन बाँकी राखेर घर फिर्नुभयो । खुशी हुनुभएको थियो । दैनिक भेटघाट गर्न र हौसला दिइरहन सकिएन । कहिलेकाहीँ घर पुग्दा ताला झुण्डिरहेको हुन्थ्यो । एक बिहान अचानक आत्महत्याको खबर सुन्दा हुनसम्मको दुःख लाग्यो ।
हालै नेकपाको वार्ड कमिटीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको नाममा सम्पन्न गरिएको जनसभामा पार्र्टीका जिल्ला तहसम्मका ओहोदाका विभिन्न वक्ताहरूका भाषणहरू, स्थानीय कमिटीको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति गठन भएको र त्यसपछिका विविध चर्चाहरू, जुलुस, तुरुन्त पार्टीबाट निष्काशनको कारवाही, कालो मोसो र जुत्ताको माला लगाई बजार घुमाउने लगायतका मागसहितका अनेकअनेक कुरा सुन्ने अवसर प्राप्त भयोे ।
म यसबेला सबै पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो र धेरै मुखहरूबाट ‘संस्थाको जग्गा बेची खाने ठूलो अपराधी’को रूपमा चित्रित गर्दै प्रचारित भएको छु । धेरै मित्रहरू छक्क परेका छन् । कोही स्तव्ध छन् । शुभचिन्तकहरूका जिज्ञासाले हैरान बनाएको छ । कमजोर मानसिकता भए यसबेलासम्म कि त आत्महत्या गरिसकेका हुन्थँे कि त ठाउँ छाडेर भागिसकेको हुने थिएँ । सम्पूर्ण प्रचार र हल्लाले बाबु पागल बन्लान् भन्ने डरले होला छोराले इन्टरनेटको लाइन पनि कटायो । निरङ्कुश पञ्चायत शासनले दिएको भन्दा धेरै गुणा ठूलो मानसिक यातना अनुभव भयो । त्यस कालको उत्तराद्र्धमा भगवती स्कुलमा लगनशीलतासाथ कार्यरत थिएँ । भौतिक पूर्वाधार थिएन । आयस्रोत पनि थिएन । विद्यालयको अवस्था सुधार्ने हिम्मत साथ मिहिनेतपूर्वक काम गर्ने प्रयत्न थियो । तर पटकपटक प्रहरी थानालाई २४ घण्टाभित्र पक्रेर ल्याउन ‘माथि’बाट आदेश आउने गरेको रहेछ । तर ठानाले निर्दोष ठहर गरेको रिपोर्ट गर्दो रहेछ ।
‘चौबिसै घण्टा कडा निगरानीमा रहिरहेको व्यक्ति हो । शैक्षिकबाहेक अरु कुनै गतिविधि गरेको नदेखिएको, बिहानदेखि बेलुकैसम्म विद्यालयमै र राती पनि घरमा मेरै छोराछोरी समेतलाई ट्युसन पढाउँछ । दिनभरिको कामले भुतुक्क भएर सुत्छ । गलत रिपोर्टको आधारमा गरिएको निर्णय पनि गलतै हुन्छ । परिणामले पनि व्यवस्थाको भलो गर्दैन ।’ दुइ तीन कार्यकालका प्रहरी इञ्चार्जहरूले यस्तैयस्तै आशयको जाहेरी गर्ने गरेको सुन्ने गर्थें ।
पछिल्लो कालमा भने एकजना इन्चार्जले रामराजाप्रसादको बमकाण्डमा फसाउन गरेको षडयन्त्र पनि खुलस्त भयो र विफल भयो । त्यसपछि पनि कुनै कुनै विद्यार्थी र शिक्षक समेतलाई थानामा बोलाएर व्यवस्थाविरोधी कामका लागि उक्साउने गरेको बयान गराएर पक्राउ गर्ने आधार समेत बनाएको कुरा तिनै विद्यार्थी र शिक्षकबाट थाहा पाइयो । तर आरोपहरू नटिक्ने र प्रमाणित हुन नसक्ने, प्रत्युत्पादक हुने ठानेर होला, शासकहरूका कौशल फेरिए । कहिले वर्षदिनसम्म तलब नदिने, कहिले पहाडका विभिन्न विद्यालयमा ५–७ ग्रेडसम्म बढी तलब दिन्छौं, हाम्रो स्कुलमा जाऊँ भनेर फकाउन मान्छे पठाउने, कहिले राजीनामा दिए मात्र एसएलसीका परीक्षार्थीहरूको प्रवेशपत्र दिने भनेर विद्यार्थी र अभिभावकहरूको दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भयो ।
कति गर्दा पनि पार नलागेपछि २०४५ सालमा एक रात सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक राखेर खारेजीको निर्णय भएको थियो । सदस्य सचिवको हैसियतले मैलै नै हाँसीहाँसी आफू र सहकर्मी गुरु बराल उपरको कारवाहीको निर्णय लेखेको थिएँ । तत्कालीन नेकपा (माले)को भित्री व्यवस्थापनबाट म शिक्षकको रूपमा बेलबारी आएको थिएँ । अहिले सम्झना भइरहेछ, बेलबारीमा शिक्षण गर्नथालेको केही दिनमै तत्कालीन पार्टी नेतृत्वबाट बेलबारी छाडेर अन्यत्रै जानुपर्ने निर्देशन पनि आएको थियो । अस्वीकार गरें । त्यसबेला ती भूमिगत नेताले ‘तपाईं बेलबारीमा टिक्न सक्नुहुन्न’ भनेको कुराको पनि खासखास बेला सम्झना हुन्छ र झस्किन्छु ।
धेरै समय बितेको छ । अल्जाइमर्सले बिर्सने क्रमलाई तीव्रता दिन थालेको छ । त्यसैले सम्झन सकेजति र अनुभूत गरेका कुराहरू यहाँ स्मरण गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।
मलामी जाँदाको अवस्थामा ती मित्रले सुइँको पाएरै त्यस्तो अप्रिय प्रश्न गरेको त होइन ? कताकता मनले भन्छ, यस्तो पनि संयोग हुने रहेछ ! तर जसो भए पनि पक्कै रमाइलोका लागि हँसीमजाक गरेका भने होइनन् । उनै जानून् । तर माले कालको जस्तै सुलसुले प्रचार शैलीचाहिँ मजाले प्रयोग भएछ । जिम्मेवार व्यक्तिले भनेका कुरालाई विश्वास किन नगर्ने ?
हामीसँग वास्तविकताको गहिराइमा प्रवेश गर्ने न संस्कार छ, न त चासो र फुर्सद नै । कहिले पनि सहारा नटेकेका कमरेड नन्दराज गिरीलाई समेत मुछेर पटक पटकका बैठकमा आउने गरेको बयानको श्रव्यदृश्य समेत प्रस्तुत गरिएको छ । जब कि सहाराको बैठकै भएको छैन । वास्तवमा उहाँको नाममा त नेकपाले गौरव गर्नुपर्ने हो । झापा सङ्घर्षकाल, कोकेकाल, मालेकाल, एमालेकाल र हाल नेकपाकालमा समेत निरन्तर सक्रिय र सकरात्मक रहनुभएको कमरेड हुनुहुन्छ उहाँ । पद र प्रतिष्ठाको भोक कहिल्यै नजागेको । नेतृत्वलाई खुशी बनाउने चरित्र नभएको ।
यति लामो अवधिमा व्यक्तिगत लाभको लागि कहिले केही नसोचेको, व्यक्तिगत फाइदाको खोजी गर्दै कुनै पनि राजनीतिक पसलतिर नदौडेको, त्यसबेलाका ठूलाठूला नेताहरू समेत कोही दरबार पसेका, कसैले आफ्नै पार्टी खोलेका छन् । कोही चारैतिर दौडिएका छन् । खोज्ने हो भने पार्टीभित्र निरन्तर र सक्रिय रहेका त्यस बेलाका कार्यकर्ता अहिले कति होलान् ? त्याग र तपस्याको कसले कहिले मूल्याङ्कन गर्ने होला ? यस्ता थुप्रै तथ्यहरू छन् जसले वर्तमान नेकपाको असली अवस्था के छ र के हो भन्ने प्रमाणित गर्दछन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको शुरुको बेला मन महत्वाकांक्षी बन्यो । कुनै दिन मलाई पनि पार्टीले खास काम गर्ने अवसर दिनेछ भन्ने विश्वास थियो । म लोक कल्याणको क्षेत्र रोज्नेछु । लोककल्याणकारी नीतिलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पु¥याउनेछु । यस विचारले प्रशस्त अध्ययनमा जुटें । पश्चिमी मुलुकहरूका विधिविधान, सिद्धान्त र अनुभवहरू प्नि बटुल्ने प्रयास गरेँ । ती मुलुकहरूका भ्रमणमा जाँदा प्रत्यक्ष हेर्ने र साक्षात्कार गर्नेसम्मको प्रयास गरेँ । आफ्नो धरातलमै सानो कामको थालनी गरेर व्यावहारिक अनुभव बटुल्ने उद्देश्य बनाएँ । त्यसैको परिणाम हो सहारा परिवारको स्थापना ।
नमूना गाउँ (कम्युनिष्टहरूको भाषामा कम्युन) बनाउने कल्पना गरियो । १ सय जना अनाथहरूको व्यवस्थापन गरियो । तत्कालका लागि कुनै दातृसंस्थाको सहयोगमा काम थाल्ने, क्रमशः आत्मनिर्भरता विकास गर्दै जाने धारणा थियो । दीर्घकालसम्म विदेशीहरूको आर्थिक सहयोग भइरहन सक्दैन । निश्चित अवधिको लागि मात्र हुनु नितान्त स्वाभाविक हो । स्थानीय समुदायसँग क्षमता विकास भइसकेको थिएन । आफ्नो दृष्टिकोण नेतृत्वलाई नबुझाउनु, कामले नै सबै बुझाउनेछ भन्ने धारणा बनाउनु मेरो त्रुटि भयो । नेतृत्वलाई खुशी बनाउने र उद्देश्य पूरा गर्ने शैली, सीप र क्षमताको मसँग सधैँ नितान्त कमी भयो । यसले पार्टी नेतृत्व र मेरो बीच ठूलो दूरी बनाएछ भन्ने कुरा धेरै पछि मात्र थाहा पाएँ ।
जस्तै सङ्कटमा पनि निष्ठालाई सधैँ बचाएर राखियो । जिम्मेवारीका कामहरू बुताले भ्याउन्जेल गरियो । एकपटक एउटै व्यक्ति सांसद र जिल्लाको नेतृत्वमा रहन नहुने निर्णय आयो । खुशी भएर तुरुन्तै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेँ । किनकि मलाई द्वैध जिम्मेवारीले गाह्रो भइरहेको थियो । पछि केही साथीहरूले भने, तिमीलाई हटाउन नै त्यस्तो निर्णय गरिएको हो । त्यसपछि मात्र छक्क परेँ ।
सपना हत्याकाण्डको छानबिन समितिमा मलाई समावेश गरिएन । फेरि छक्क परें । हिजोआज सम्झिन्छु, के भएको होला ? इलाममा पार्टीले बिदाइ गर्दा मेरो छाप्रो र सानो सुन्तला बगैंचा पनि पार्टीलाई जिम्मा लगाएर आएको हुँ । धेरै वर्षपछि मात्र थाहा भयो, पार्टीको तर्फबाट मेरो सम्पत्ति जिम्मा लिने कमरेड त गुप्तचर विभागको कर्मचारी पो रहेछ ! बेलबारीमा पनि त झण्डैै सुकुम्बासी भएको ! तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कमरेड दीनानाथ शर्माले बचाउनुभयो । नत्र कुनै पनि दिन बसेको घर र जग्गा छाडिदिनू भन्ने अदालतको आदेश आउने रहेछ ! धन्यवाद कमरेड दीनानाथ शर्मा ! धन्यवाद कमरेड भीम आचार्य र कमरेड गोपी आछामी ! तपाईहरूले मलाई उठिबास हुनबाट बचाउनुभयो !
माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दा तत्कालीन प्रशासनले ठहर गरेको ठीकै थियो । त्यसबेला धेरै मानिसहरू दिनभरि एमाले र राती माओवादी बन्छन् भन्थे । सेना वा प्रहरीबाट पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतले छुटाउनका लागि पक्का एमाले हो, माओवादी हुँदै होइन । तु छुटाउनुप¥यो भन्दै पार्टीको दबाब आउने गर्दथ्यो । पृतनापति, डीआइजी, प्रजिअ आदिसँग गलत सूचनाको आधारमा पक्राउ गरियो । यसरी तपाईहरूले नै मानिसहरूलाई जबरजस्त माओवादी बनाइरहनुभएको छ भन्ने दाबी गर्दा माइन्युट बुकसहित कतिपय गतिविधिकोे प्रमाणैसमेत प्रस्तुत हुन्थ्यो ।
झुटो दाबी गरेर लज्जित हुनु परे पनि सुरक्षाको अभावमा बाध्यतावश भएको हुन सक्ने भन्दै धेरै अनुरोध गरेर, कुनै किसिमले विश्वास दिलाएर आपूmले जिम्मा लिएर फेरि गतिविधिमा लाग्न नदिने आश्वस्त गरेर धेरैलाई छुटाउनुपरेको थियो । यो किन उल्लेख गर्दैछु भने तत्कालीन एमालेका पंक्तिभित्र प्रशस्त द्वैध चरित्रका मानिसहरूको उपस्थिति थियो । बैठकमा भएका निर्णयहरू तुरुन्तै माओवादीसम्म पुग्ने गर्दथ्यो । यो साँचो हो । इमान्दारी र निष्ठा कमजोर हुँदा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो चरित्रले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन ।
अर्कोतिर गाउँगाउँका इमान्दार र प्रभावशाली साथीहरूलाई तोकिएको चन्दा साथै एमालेबाट राजीनामा गरेको विज्ञप्ति नआए भौतिक सफाया समेत कुनै पनि किसिमको कारवाही भोग्न तयार रहनुपर्ने भन्ने धम्की आउने गरेको थियो । दुःख लाग्ने अप्रिय घटनाहरू पनि भइरहेका थिए । पार्टीका नेतृत्वलाई जानकारी गराउँदा ‘जे जसो गर्दा बाँच्न सकिन्छ त्यसै गर्नू’ भन्ने निर्देशन हुन्थ्यो । धेरैले निकै ठूलाठूला जोखिम मोल्नुपरेको थियो ।
यस्ता सङ्केतहरू बेलबारीको अनाथ आश्रम सहारामा पनि प्रशस्त देखिन थालेको थियो । सानो भनिएको बालक पनि ठूलो कुरा गर्ने भइसकेको थियो । कुनै न कुनै दिन ठूलो रकम चन्दाको माग आउन सक्ने अवस्था थियो । तर उनीहरूको माग पूरा गर्न सकिने सम्भावना थिएन ।
‘दुइ भान्से र दुइ सफाइ कर्मचारी मात्र राख्नू’ भन्ने दातृसंस्थाको सुझाव थियो । तर हामीसँग धेरै कर्मचारी थिए । कसैलाई निकाल्न सकिने अवस्था थिएन । पटकपटकको उनीहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकिएन । बिस्तारै उसले पैसा दिन ढिलाइ गर्न थाल्यो । कुनै बेला त चार महिनामा मात्र बल्लतल्ल एक महिनाको पैसा दिन पनि हिच्किचाउन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम बन्द गर्नुको विकल्प थिएन ।
नेत्रहीन विद्यार्थीहरूलाई कबिर माविका प्रधानाध्यापक र नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्षको अनुरोधमा एक वर्षभित्रै उनीहरूको आफ्नै छात्रावास निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिने मौखिक शर्तमा आश्रय दिइयोे । तर वर्षौ बित्दा पनि छात्रवास निर्माण हुन सकेन । नेत्रहीन सङ्घले त उल्टै सबै भौतिक सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि चलखेल पो गर्न थाल्यो । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्वमा दबाब पो आउन थाल्यो । अर्कोतिर जीर्ण भवन भत्केर ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि बढ्यो ।
कदाचित दुर्घटना भइहाले को जिम्मेवार हुने ? विवेकको खडेरी त स्थायी विशेषता हुँदै हो । निश्चय नै सहारालाई नै त्यसको दोष आउने पक्का थियो । यस्तो जोखिमको प्रबल सम्भावना लाई नजरअन्दाज गर्न सकिएन । वास्तवमा सहाराको कुनै दायित्व छैन भनेर पन्छिन पाइने अवस्था रहेन । धेरैजसो मानिस आफ्नो लागि वकिल र अरुका लागि न्यायधीशको भूमिका निर्वाह गर्ने चरित्रका हुन्छन् । गम्भीर सांस्कृतिक पछौटेपन छ । यसकारण यहाँ विवेक प्रयोग हुन क्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन ।
दलबलको दबाबबाट नै जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । नेत्रहीनहरूको छात्रवास निर्माण गर्न कतै, कुनै निकाय वा व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएन । ज्ञान महायज्ञमा मात्र सकेसम्म दान दिने परम्परा छ । यसर्थ कसैको मुख नताकी छात्रवासको लागि सहाराले नै यथाशीघ्र जमीनको व्यवस्था गर्नु अति नै जरुरी भइसकेको थियो । अर्कोतिर उत्कृष्ट शैक्षिक गतिविधि भए तापनि स्वयम् विद्यालयको नाममा एक टुक्रा जमीन पनि थिएन ।
यस्तो अवस्थामा छात्रवास निर्माणको लागि सानो टुक्रा भए पनि विद्यालयलाई जमिन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सहाराकै हो भन्ने जबरजस्त बुझाइलाई साकार बनाउनुपर्ने बाध्यता थियोे । अतः छात्रवासको लागि विद्यालयको नाममा घडेरी खरीद गरियो । त्यही घडेरीमा निर्मित भवनमा अहिले नेत्रहीन विद्यार्थीहरूको छात्रवास सञ्चालन भइरहेको छ ।
आश्चर्यको कुरा यस बेलासम्म यी सम्पूर्ण समस्याका विषयहरूमा सबै पक्ष, स्थानीय समुदाय, समाजसेवी र तत्कालीन एमाले र वर्तमान नेकपा कसैको ध्यानाकर्षण भएन ।
केही वर्षअघि सहारा परिवारको सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति कबिर माविको नाउँमा लैजाने उद्देश्यले बेलबारीका एमाले नेतृत्व लगायत बुद्धिजीविहरूको एक बैठकमा लामो छलफल समेत गरिएको थियो । तर त्यसपछि यो विषयमा कुनै चर्चा भएन । कसैले थप चासो र सक्रियता लिएन ।
वर्षौंसम्म केही ठोस कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सहारा नशालु पदार्थ सेवन गर्नेहरू र कारोबार गर्नेहरूको अखाडा बन्यो । बाटो हिँड्न पनि डरलाग्दो बनेको गुनासो व्यापक हुन थाल्यो । स्थानीय समुदायले दबाब दिन थाल्यो ।
यसैकारण केही न केही गर्नुपर्ने बाध्यताको अवस्था सिर्जना भयो । पूर्व गाविस अध्यक्ष, शालीन व्यक्तित्व भएको, इमान्दार समाजसेवी शिवप्रसाद बराललाई सोच्न र रचनात्मक कामहरू अनुसन्धान गर्ने अनुरोध गरियो । यसकारण कि उमेर र शारीरिक अवस्थाले मलाई निस्क्रिय बनाएको छ । हिँडडुल धेरै कम भएको छ । विवाहको निम्तोमा र मलामी चाहिँ जसरी पनि जाने प्रयत्न गरिरहेको छु ।
समाजको मूल्याङ्कन के छ जान्दिनँ । तर मेरो अनुभव र ज्ञानले भन्छ, धैर्य र सहनशीलताका धनी हुन् शिव बराल । सामाजिक जीवनको राम्रो पर्यवेक्षक र विश्लेषक पनि हुन् । सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, उत्तम सल्लाह दिने र सक्दो सहयोग गर्ने गुण भए पनि कतिपयले उनलाई मन पराउँदैनन् । यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । कोही पनि सबैको प्रियपात्र बन्न सक्दैन । कुनै हितैषीकोमा एक छाक खाना खाएकैमा उहाँको आलोचना भएको पनि सुनेको छु ।
मेरो दृष्टिमा उहाँ कम्युनिष्ट संस्कृतिभित्र निकै राम्ररी घुलमिल, सम्मिलित र रूपान्तरित हुन सकेका, सर्वहारावादी चरित्र ग्रहण गरेका, पार्टीका नीति र कार्यक्रमको गहिराइभित्र प्रवेश गर्ने बानी र तत्परता भएका, सोही अनुसारको चरित्र र सरल जीवनशैली बनाएका अति नै भरपर्दो व्यक्ति हुन् । मलाई उहाँमाथि भूमिगत कालदेखि आजको मितिसम्म विश्वास छ । उहाँ र ममा एउटा समानता पनि छ, धेरै सहने अनि कम बोल्ने । उहाँ पनि आफ्नो क्षमता देखाएर आपूmलाई बेच्न नजान्ने, नचाहने । म पनि ठीक त्यस्तै । त्यसैले पछि प¥यौं हामी र पार्टीको उपल्लो तहबाट समेत हेपियौं पनि ।
शिवजीलाई ‘सहारा’लाई अघि बढाउँ भनेँ । तपाईंकै अध्यक्षतामा नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरौँ भनेँ । युवा लक्षित कार्यक्रमहरू गरौँ, म सधैँ साथ दिनेछु भनेर उहाँसँग अनुरोध गरेँ । उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । अनुभव, ज्ञान र सहयोगको कमीले लामो समय उहाँ अल्मलिनुभयो । नवीकरण कार्यका लागि युवा नेता कृष्ण गुरुङले १० हजार रुपैयाँ सहयोग पनि गर्नुभयो । यस्तै बेलामा फन पार्कको योजनाको कुरा सुनेँ । बैंककको एउटा फन पार्क हेरेपछि मेरो मस्तिष्क रुमलिएको थियो ।
यहाँ प्रस्तावित योजना अलि फरक किसिमको भए पनि त्यो भन्दा पनि उत्कृष्ट हो कि भन्ने ठानें । यो योजनासँग सहकार्य किन नगर्ने ? बेलबारीको एउटा भव्य आकर्षण बन्नेछ । त्यसो भए पर्यटन तथा व्यापार प्रबद्र्धन हुनेछ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनाका साथै बेलबारीको राम्रो परिचय पनि स्थापित हुनेछ भन्ने मेरो छोटो बुद्धिले भन्यो । फनपार्कसँग सम्बन्धित महानुभावहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव लैजाने, त्यो सहकार्यले उद्यमशीलता र रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने परिकल्पना गरियो ।
सो कुराकानीको परिणाम सकरात्मक रह्यो । त्यो सहकार्यबाट ४ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने समझदारी बन्यो । धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि तयारी पोशाक उद्योग, नेपाली ढाका उद्योग, सेक्युरिटी तालीम र कृषिका कार्यक्रमहरू गर्ने सहमति बन्यो । २ सय ५० बाट शुरु गरेर १ हजार जनासम्मलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरियो । त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारहरूलाई सबै अवसरहरूमा प्राथमिकता दिने सहमति बन्यो । उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउने ध्येयले उक्त कार्ययोजना बनाइयो ।
त्यसलाई सफल बनाउन धितोको रूपमा जमिन राख्ने बाहेक अरु विकल्प पनि थिएन । समयमै सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएपछि पार्टी, स्थानीय समुदायलगायत कतैबाट पनि आलोचना र विरोध नभएपछि कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयत्न भएको हो । तर अब त्यो सम्भव भएन । लाग्छ, बेलबारी पछि प¥यो ।
चट्याङ परेजस्तो अकस्मात विरोधका आवाजहरू सुनिएपछि बेलबारी नगर कमिटी, नेकपाबाट गठित छानबिन समितिसँग मैले यस्ता माग प्रस्तुत गरेको थिएँः ‘यदि भए गरेका काम कुराहरू अपराधपूर्ण हुन् भने तिनको जिम्मेवारी म लिन्छु । दोष हो भने सबै मेरो दोष हो । यसबापत जेल नै बस्नुपर्ने भए पनि खुशीसाथ बस्नेछु । ‘ह्योजु’ बन्नुपर्ने भए पनि, जुत्ताको माला लाउनुपर्ने भए पनि म अहिले नै तयार छु ! फेरि पनि भन्छु, म तयार छु !
कमजोरी कहाँ छ ? पार्र्टी खुला भएपछि राजनीतिक प्रशिक्षणको कमी भयो । तीव्र रूपमा गुणात्मकतामा ह्रास आयो । निम्न पूँजीवादी चरित्र र चिन्तनले मलजल पायो । हुँदाहुँदा पार्टीभित्र पैसा नहुनेहरूको भूमिका लोप हुँदै गयो । पुरानो समाजका अवशेषहरू, प्रभावहरू, रीतिरिवाजहरू र आनीबानी जस्ताका तस्तै रहे । तिनलाई परिवर्तन गरी कम्युनिष्ट संस्कृति निर्माण गर्नतिर ध्यान पुग्दै पुगेन ।
पैसा, चुनाव, पद र प्रतिष्ठामा मात्र ध्यान केन्द्रित भयो । पार्टीभित्र स्वार्थलोलुपता, व्यक्तिवाद, पूर्वाग्रह, गुट् सङ्घर्ष र स्वेच्छाचारिता मौलाएको छ । सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो सदस्यको हित हेर्छ । आजको कम्युनिष्ट पार्टीले त गुटको मात्र हित हेरेको देखिन्छ । वास्तविकता त के हो भने गुटभन्दा माथि उठेर पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मात्र हित हेर्दछ भने पनि त्यो कम्युनिष्ट पार्टी हुन सक्दैन । पार्टीभन्दा बाहिर भएकै कारणले देशका योग्यतम व्यक्तिहरूको योग्यतापूर्ण सेवाबाट देश र जनतालाई विमुख पार्नु कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन ।
विभिन्न विश्वविद्यालयहरू तथा सरकारी संस्थाहरूमा गरिने नियुक्तिहरूले यस्तो देखाएको छ । स्वाभिमानी व्यक्तिहरूले सेवा र चाकरी गर्दैनन् । खासखास बेलामा खासखास व्यक्तिहरूमाथि सिद्धान्तहीन र सुनियोजित प्रहार गरिन्छ । सहाराको नाममा म तथा शिवप्रसाद बरालमाथि गरिएको प्रहार एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।
हुन त गौरवमय पार्टी भनेर भनिए पनि विगतका घटनाहरूलाई केलाउँदा मन खुशी हुन सक्दैन । पार्टीको हितको लागि, राष्ट्र र जनताको साथै सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिका लागि धेरै बलिदान भएको छ । सुखानीमा हत्या गरिएका कमरडेहरू रामनाथ दाहाल र भोगेन राजवंशीको बलिदानको अवमूल्यन गर्दै उनीहरूलाई शहीद मान्नुहुन्न भन्नेहरू पनि पार्टीको नेतृत्वभित्रै थिए । चारु मजुमदारको लाइनलाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण बनाउनु नै उनीहरूको दोष थियो । पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गरिएकै हो ।
बेलबारीको पार्टी अफिसभित्र प्रवेश गर्दा अझ पनि संस्थापक नेता पुष्पलाललाई अपमान भइरहेको भान हुन्छ । पार्टीभित्रको मर्यादाक्रमको बारेमा भएको हालैको विवाद र बहसलाई नियाल्दा वरियताको सम्बन्धमा पार्टीका सबै तह मर्यादाक्रमको बारेमा सचेत देखिन्छन् । तर पार्टीका संस्थापक नेतालाई बेलबारीले मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र जीवराज आश्रितपछिको स्थान दिएको छ । वर्षाैंदेखिको यो व्यवहारको बारेमा किन कसैको ध्यान जाँदैन ?
नेकपा, बेलबारीले सर्वोच्च नेतामाथि नै यस्तो व्यवहार गर्दछ भने हामीप्रति गरिएको व्यवहार त अति नै नगण्य भयो । होइन र ? जे होस्, यो दुनियाँमा हामी मात्र पीडित छैनौं भन्ने कुरा शिवप्रसाद बराललाई भन्न चाहन्छु, ‘हे प्रभु ! मलाई मेरा साथीहरूबाट बचाउनुहोस् !’ भन्ने भनाइले प्रमाणित गर्दछ ।